MI အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများဘာ့ဂ်မှလာမယ့်? - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်MI အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်ခများဘာ့ဂ်မှလာမယ့်?
28 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, Metrobus, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြှင့်! အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğlu, Metro, Metrobus နှင့် IETT အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်ရှင်းပြခဲ့ဘူး! IETT အစ္စတန်ဘူလ်က Metro, Metrobus ဘယ်လောက်လိမ့်မည်စျေးနှုန်းများကြီးပြင်း? ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်နောက်ဆုံးမိနစ်များတွင်zamlanıyပါ!
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğlu, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်တိုးမြှင်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်! Ekrem İmamoğluအချိန်ကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်းပြဆီသို့ရောက် လာ. ,! İmamoğluကြေညာချက်ထဲမှာ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏မျက်နှာသာအတွက်နိုင်ငံသားများပေမယ့်အလုပ်အကိုင်အလုပျနဲ့သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုလျှော့ချတစ်မှုနှုန်းမှာမြင့်တက်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်၌ဤအမှုကိုပြုသူကလူ။ " သူကပြောပါတယ်! ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသစ်ကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်အတိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အလိုရှိသနည်း
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, Sarachane IMM အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌ဂျာနယ်လစ် '' မေးခွန်းများကိုဖြေကြား! İmamoğluအတွက်ရထား၏ဖော်ပြချက် "အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေပြုစုပျိုးထောင်"ဖော်ပြချက်ရရှိခဲ့! İmamoğlu, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တိုးမြှင်အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်!
အစ္စတန်ဘူလ်ကြွလာတော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ZAMA! အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ZAMLANIY ဖြစ်ပါသည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် zamlan ပါလိမ့်မယ်။ Metro နှင့် Metrobus IETT လိုင်းများ၏စျေးနှုန်းမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်အသစ်အသေးအပြီးသတ်မယခုအချိန်တွင်ဘို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်အတိုင်းထမြောက်တော်မူ။ Ekrem İmamoğlu "မဖြစ်စလောက်ငွေပမာဏကို" လုပ်ရမည့်အချိန်ကရှင်းပြသည်။
အတူတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသစ်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစျေးနှုန်းဘာ့ဂ်နှင့်အတူစပ်စုသည်။ (to-date ဖြစ်အောင်ထမြောက်တော်မူ) ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေအချိန်ဇယားကိုကျနော်တို့ဒီစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မယ်ချက်ချင်းကူးစက်နေပါတယ်။ ;
အချိန်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခလာ 01 / 07 / 2017 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်စီးခတိုးမြှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဆီသို့ရောက် လာ. , အချိန်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှရောက်လေပြီ။ IETT ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားအဆိုပါရထားလမ်းနှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့ရှိပါတယ်အခကြေးငွေအချိန်ဇယားပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကအခွန်နှင့်အတူ 1 အပြည့်အဝလက်မှတ် 2017 နှုန်းစနေနေ့မိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဇူလိုင်လ 2,60, ကျောင်းသားလက်မှတ်နှုန်း 1,25, အလျှော့စျေးလက်မှတ်£ 1,85 ဖြစ်ခဲ့သည်။ IETT ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့်ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားအဆိုပါရထားလမ်းနှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့ရှိပါတယ်အခကြေးငွေအချိန်ဇယားပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့ဇူလိုင်လ 1 2017 ...
Sakarya အချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ခ 02 / 09 / 2019 ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူမြို့အနှံ့ UKOME, minibuses, တက္ကစီမီနီဘတ်စ်, စီးတီးဘတ်စ်ကား, ကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှု 22 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပျှမ်းမျှနှုန်းတက္ကစီကိုပုံမှန်အတိုင်းနှင့်အတူအစီအစဉ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါ updated အခွန်အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 27 ၏အဖြစ်လျှောက်ထားခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာတွင်ဖွငျ့ (UKOME) ကကြေညာချက် "တည်းဖြတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးတီး (UKOME) တွင်အားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အခွန်။ ထို့နောက်ကြောင့်ပြည်ထောင်စု UKOME အထွေထွေညီလာခံမှတင်သွင်းခဲ့သဖြင့်လုပ်အသစ်တစ်ခုကို update ကိုတောငျးဆိုခကျြအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Tradesmen နှင့် Artisan ၏ Sakarya ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအပေါ် updated အခွန်များမြင့်တက်ကုန်ကျစရိတ်မှမေလ 1 2017 ။ UKOME ရက်စွဲပါသြဂုတ်လ62019 ကိစ္စများအထွေထွေညီလာခံ "တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည် ...